Xog la heley: Qaxootiga ku dhuumaaleysanaya dalka Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xog la heley: Qaxootiga ku dhuumaaleysanaya dalka Sweden
La daabacay tisdag 16 maj 2017 kl 16.42
SR oo wareeysio la yeelatay 84 ruux oo ku dhuumaaleeysaneya Sweden
Qaxooti dhuumaaleeysaneya. sawir: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Dalka Sweden ayey ku sugan yihiin noocyo kala duwan ee ku dhuumaaleeysanaya, iyadoona barnaamijyada lagu doortay dadyoowga dalka magan-gelyada ka dalbadey, ku heley diidmo, hase yeeshee ka door bidey iney dalka ku dhuumaaleeystaan halkii ey waddammadoodii dib ugu laaban lahaayeen.
Suxufiyiinta badankood waxey isticmaaleen foom ey su’aalo ku qoran yihiin oo jawaabihii ka soo baxey isu geeyngeeyn lagu sameeyey. Hase yeeshee looma arki karo sal-dhig tira-koob, maadaama aan dadyoowga dalka ku dhuumaaleeysaneya loo dooran si indho-la’aan (bakhtiyaa-nasiib). Midda aannu soo ban-dhigney waxay tahay jawaabihii aannu ka helney dadyoowgii la wareeystey iyada oo tusaale ka bixineeysa xaaladaha ey ku sugan yihiin dadyoowga dhuumaaleeysiga ku jooga dalka.
Guud ahaan waxaa lala kulmey 84 ruux oo 52 ka mid ahi yihiin rag, halka 32-na yihiin haween. Siddeed ka mid ah dadyoowgaa ayaa ku jawaabey iney da’doodu ka hooseeyso 18 jir, da’da lagu qaan-gaaro.
Dadyoowga aannu la kullaney ayey badankood ka soo jeedaan waddammada Albaaniya, Afgaanistaan, iyo Ciraaq, inta kale waa waddammo isku dhex jira, hase yeeshee badankood waxey ka soo jeedaan waddammada carriga Balkaanka iyo Bariga Dhexe. Qaar waxey ka soo jeedaan Afrika, Koonfurta Aasiya iyo koonfurta Ameerika oo qaar aan badneeyni ka soo jeedaan.
Waxaannu wax ka weeydiiney sababta ey u door-bideen iney Sweden ku nagaadaan oo aaney dib ugu noqon waddammadoodii. Jawaabta caadiga ah ayaa ah waxaannu ka cabsi qabnaa dil, daba-gal naloo geeysto ama aannu ku noolaanno xaalad adag haddii ey waddammadoodii dib ugu laabtaan.
Siyaabaha ey u deggan yihiin ayaa kala duwan. Waxey la deggenaan karaan reer, asxaab, hooy ey la qeeybsadaan dadyoow sidoo kale dhuumaaleeysi ku sugan. Ama uu urur dadyoowga tabaaleey-san caawiya ama shakhsi ka caawiyo sidii ey hoy ku kireey-san lahaayeen. Qaar ka mid ah ayaa sheegay iney guurguuraan si aan loo helin. Qoys ayaa jira sheegay iney xilli kuleeyle ah ey gurguureen muddo sagaal jeer ah.
Si ey ku soo saartaan nolol-maalmeedkooda waxey qaarkood sheegeen iney ku shaqeeyaan suuq madow tusaale ahaan goobaha shaqooyinka dhismooyinka ama gawaarida, qaarkood waxey ku shaqeeyaan nadaafadda, qaarkood maqaayadaha ama cowska oo ey jaraan. Intooda sheegtay mushaarkooda saacaddii ayaa sheegey inta u dhexeeysa 20 illaa iyo 100 koron saacaddii. Qaarkood waxey ka cabsi qabaan iney shaqeeyaan si aan loo qaban. Waxaa caadiyan ah iney dhar iyo cunno ka helaan ururrada taageera dadyoowga tabaaleey-san, dadyoow caadi ah iyo wixii la mid ah.
Qaar badan oo aannu wareeysiyo la yeelaney ayey ka dhexeeyaan iney la il-daran yihiin xanuunno maskixiyan ah. Su’aasha la xiriirta iney dareemeyaan xannuun dhanka maskaxda? Ayey 69 ku jawaabeen ”haa”, ”13” maya, halka laba ka mid ahina aaney jawaab ka bixin.
Dhibaatooyinka maskixiyanku waxey noqon karaan dhibaato dhanka hurdada la xiriirta, welwel , salcaan, walbahaar, niyad jab, fikirka ah is-dil iyo dhibaatooyinka maskixiyanka ee la soo gudboonaada dadyoowga ey dhibaatooyin horey ula soo gudboonaadeen.
Howlaha a xiriira #gömdisverige ayaa la bilaabey ka hor intii aannu dhicin falkii argixis-nimo ee ka dhacay magaalada Stockholm 7-dii bishii abriil. Wareeysiyada qaarkood ayaa la qaadey kadib dhacdadaasi, kuwaasina oo aannu ku kordhiney su’aasha ah sida uu falkaasi argagixis-nimo iyo dooddii ka dambeeysey ey u saameeysay. Kuwooda su’aashaa la weeydiiyey ayaa ku jawaabey inuu welwelkii iyo cabsidii ku sii kordhay iyo in ciidanka ammaanku dardar-gelin doonaan howlahooda la xiriira sidii ey gacanta ugu soo dhigi lahaayeen, halka qaarkoodna ka welwel qabaan in bulshadu u aragto argagixiso iney yihiin.
Waxyaabaha ey xaqa u leeyihiin dadyoowga Sweden ku dhuumaaleeysaneya
tisdag 16 maj 2017 kl 16.35
Tiro intee le’eg ayaa sharci darro ugu dhuumaaleeysanaysa Sweden
tisdag 16 maj 2017 kl 16.25
Qaxootiga waddanka isku qarinaya oo la ildaran cudurada maskaxda
tisdag 16 maj 2017 kl 10.57
Maxamed:"Waan ku khasbanahay in aan shaqo suuqa madow raadsado"
tisdag 16 maj 2017 kl 06.00